Ninoy Aquino - ဖိလစ်ပိုင်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဖိလစ်ပိုင်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်လုပ်ကြံခံရမားကို့စ '' အာဏာရှင်အဆုံးသတ်
1983 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းကဗီဒီယိုရိုက်ချက်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်အမှုထမ်းတစ်ဦးလေယာဉ် boarding နှင့်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နိုအကွီနို, ဂျူနီယာမိန့်ပြသထားတယ်ပိုမိုလေ့ပေါ်ကိုဆင်းသက်ဖို့, Ninoy Aquino ကိုခေါ်။ သူကပြုံးပြတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့မျက်စိသတိထားကြည့်ပါ။ ယူနီဖောင်းဝတ်ယောက်ျားလိုက်ရာမှသူ၏အပေါင်းအဘော်တားဆီးစဉ်အကွီနိုသည်မနီလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များ၏ချဌာနရှိရာကိုပေါ်သို့ထွက်သွားလာ။
လေယာဉ်မှတဆင့်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ကွင်း၏ရုတ်တရက်အသံ။ သမ္မတအကွီနိုရဲ့ခရီးဖျောမြည်တမ်းစတင်; နောက်ထပ်သုံးရိုက်ချက်များအသံ။
ထိုအဖြစ်အပျက်ရိုက်ကူးအနောက်ပိုင်းကင်မရာမင်းဦးခေါင်းမှမြေပြင်ရိုက်ချက်ပေါ်မှာတုံးနှစ်ခုအလောင်းများ၏ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူ။ စစ်သားအဖြစ်တစ်အိတ်လှည်းပေါ်သို့အသေကောင်တစ်ဦး hustle ။ ထို့နောက်စစ်သူရဲတို့သည်ကင်မရာမင်းမှာလာကြ၏။
Ninoy Aquino သူ့ကိုဘေးတွင် 50. ၏အသက်အရွယ်မှာသေ, Rolando Galman လည်းသေပြီအိပ်လေ၏။ ဖာဒီနန်မားကို့စရဲ့ စစ်အစိုးရအကွီနိုသတ်ဖြတ်ဘို့ Galman အပြစ်တင်မည်ဟု - ဒါပေမယ့်ဖိလစ်ပိုင်အနည်းငယ်သမိုင်းပညာရှင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများအရေးဆိုမှုမဆိုယုံပေးပါ။
Ninoy Aquino ရဲ့မိသားစုသမိုင်း
ဘီနင်ရှိမောင်အကွီနို, Jr. ချစ်စနိုး "Ninoy" Concept, Tarlac အတွက်ချမ်းသာတဲ့မြေပိုင်ရှင်မိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင် Servillano ကွီနိုက y Aguilar anti-ကိုလိုနီခေတ်ဖိလစ်ပိုင်အတွက်အထွေထွေခဲ့, သူ့အဘိုး 1932, နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်နေ့က တော်လှန်ရေး (1896-1898) နှင့်ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်စစ်ပွဲ (1898-1902) ။ အဘိုး Servillano မှပြည်ပရောက်ခဲ့သည် ဟောင်ကောင် နှင့်အတူ 1897 ခုနှစ်တွင်စပိန်တို့က Emilio Aguinaldo နှင့်သူ၏တော်လှန်ရေးအစိုးရ။
နိုအကွီနို Sr; ခေါ် "Igno" ဟုရှည်လျားအချိန်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းသူသည်ဂျပန်ထိန်းချုပ်ထားသောအစိုးရအတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်၏နာယကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်ရဲ့ထုတ်ပယ်ခြင်းအပြီးတွင်အမေရိကန်အတွက် Igno ထောင်ချခံရ ဂျပန် နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုအဘို့ကြိုးစားခဲ့ခံရဖို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကသူ့ကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့။
မိမိအရုံးတင်စစ်ဆေးရာအရပ်ကိုယူမီသူက 1947 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းနှလုံးတိုက်ခိုက်မှု၏အနိစ္စရောက်လေ၏။
Ninoy ရဲ့မိခင် Aurora ကွီနိုကသူ၏ဖခင် Igno ရဲ့တတိယဝမ်းကွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ Igno ရဲ့ပထမဇနီးကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်သူမသည် 1930 ခုနှစ်တွင်သူ့ကိုလက်ထပ်နှင့်စုံတွဲ Ninoy ဒုတိယခဲ့သောကလေးခုနစ်ယောက်, ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတက်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်အဖြစ် Ninoy ဖိလစ်ပိုင်အများအပြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့တက်ရောက်သည်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းမငြိမ်မသက်နှင့်ပြည့်ကြ၏။ ကောင်လေးကသာ 12 ခဲ့သည်ရုံ Ninoy ရဲ့ဆယ်ငါးမွေးနေ့အပြီးသုံးနှစ်အကြာအနိစ္စရောက်သောအခါ Ninoy ရဲ့ဖခင်တစ်ဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအဖြစ်အကျဉ်းချခဲ့သည်။
တစ်ဦးကအတန်ငယ်လစျြလြူရှုကျောင်းသား, Ninoy သည့်အပေါ်အစီရင်ခံရန်ကိုရီးယားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ တက္ကသိုလ်မှချက်ချင်းပေါ်ရွေ့လျား 17 ထက်၏အသက်အရွယ်မှာ။ သူကသူ့အလုပ်အတွက် 18 မှာဂုဏ်ပြုဖိလစ်ပိုင်ကို Legion of Honour ဝင်ငွေသည်မနီလာ Times သတင်းစာများအတွက်စစ်အပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သူက 21 တုန်းက 1954, တွင်, Ninoy Aquino ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်ကဥပဒလေ့လာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာသူကသူ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြိုင်ဘက်, ဖာဒီနန်မားကို့စအဖြစ် Upsilon Sigma ဖိရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား၏တူညီသောဌာနခွဲပိုင်။
သမ္မတအကွီနိုရဲ့အစောပိုင်းနိုင်ငံရေး Start ကို
သူကဥပဒေကျောင်းကိုစတင်ခဲ့ကြောင်းထိုနှစ်တွင်ပင်, Ninoy Aquino Corazon Sumulong Cojuangco, အဓိကတရုတ် / ဖိလစျဘဏ်လုပ်ငန်းမိသားစုထံမှတစ်ဦးခငျြးကိုဥပဒေကျောင်းသားလက်ထပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစုံတွဲသည်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုးနှစ်ရှိသောအခါပထမဦးဆုံးတစ်ဦးမွေးနေ့ပါတီမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးနှင့် Corazon အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သူမ၏တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုများအောက်ပါဖိလစ်ပိုင်မှပြန်လာသောပြီးနောက် reacquainted ခဲ့သည်။
သူတို့ 1955 ခုနှစ်, လက်ထပ်မယ့်တစ်နှစ်ပြီးနောက်, Ninoy Concepcion, Tarlac သူ့အိမ်ကမြို့မြို့တော်ဝန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ သူကသာ 22 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ Ninoy Aquino လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုအတွက်မှတ်တမ်းများတစ်ဦး string ကိုတက်ထိန်သိမ်းဖို့သွားသူသည်, 29 မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, 27 မှာပြည်နယ်၏ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း, နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 33 မှာဖိလစ်ပိုင် '' လစ်ဘရယ်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးခဲ့သည် 34 မှာသူကနိုင်ငံ၏အသက်အငယ်ဆုံးအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါအထက်လွှတ်တော်၌မိမိအရပ်က, အကွီနိုဟာစစ်အစိုးရတက် setting အဘို့နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်သာမန်ထက်အဘို့, သူ့ယခင်အူတုံဆင်းညီအကိုများသမ္မတဖာဒီနန်မားကို့စပျက်သောစပါး။ Ninoy အထူးသဖြင့် "ဖိလစ်ပိုင် '' သူ dubbing, သမ္မတကတော် Imelda မားကို့အပေါ်ကိုယူ အီဗာ Peron ကျောင်းသားများကိုအဖြစ်နှစ်ခုခေတ်ခေတ္တခဲ့ပေမယ့်," ။
ချစ်စရာကောင်းနှင့်အကောင်းတစ်ဦး soundbite နှင့်အတူအစဉ်အမြဲအဆင်သင့်, အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ninoy Aquino ဟာမားကို့စစ်အစိုးရ၏မူလတန်း gadfly အဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍသို့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူကတသမတ်တည်းဟာမားကို့စ '' ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်ကြီးမားသောစစ်ရေး outlays အပေါ်သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်ပျက်သောစပါး။
သြဂုတ်လ 21, 1971 တွင်, အကွီနိုရဲ့လစ်ဘရယ်ပါတီသည်၎င်း၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကန်-ချွတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ Ninoy Aquino ကိုယ်တော်တိုင်တက်ရောက်သူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစင်မြင့်ကိုယူမကြာမီတွင်နှစ်ခုကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုဟာချီတက်ပွဲလှု - အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားဖြင့်လူအစုအဝေးသို့လှဲချအကွဲကွဲအပြားပြားလက်ပစ်ဗုံးလူရှစ်ဦးသေဆုံးပြီး 120 ထက်ပိုဒဏ်ရာရ။
Ninoy ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ခြင်း၏မားကို့ရဲ့ Nacionalistas ပါတီစွပ်စွဲတယ်။ မားကို့စ "ကွန်မြူနစ်တွေ" အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်လူသိများတဲ့အရေအတွက်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြင့်တု မော်ဝါဒီ ကောင်းသောအတိုင်းအတာအဘို့။
စက်တင်ဘာလ 21, 1972 တွင်, ဖာဒီနန်မားကို့စဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လူစုတက်မျောခြင်းနှင့်လုပ်ကြံစွဲချက်အပေါ်ထောင်ချခံရ Ninoy Aquino ဖြစ်ခဲ့သည်။ Ninoy လူသတ်မှု, အဖျက်သမားများနှင့်လက်နက်များပိုင်သောစွဲချက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်စစ်ရေးသားပိုက်ကောင်တရားရုံးတွင်ကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည်။
ဧပြီလ 4, 1975 တွင်, Ninoy Aquino စစ်တပ်ခုံရုံး system ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့အစာငတ်ခံသွားလေ၏။ မိမိအရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေဆိုးရွားတောင်မှကဲ့သို့, မိမိစမ်းသပ်ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါအနည်းငယ်ကွီနိုရက်ပေါင်း 40 အတွက်အားလုံးအာဟာရဒါပေမယ့်ဆားတက်ဘလက်များနှင့်ရေငြင်းဆန် 36 ကီလို (80 ပေါင်) မှ 54 ကီလို (120 ပေါင်) မှအလေးချိန်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
Ninoy ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုရက်ပေါင်း 40 အပြီးနောက်တဖန်အစာစားခြင်းစတင်ဖို့ဖို့သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။
မိမိအရုံးတင်စစ်ဆေးရှည်နှစ်ပေါင်းအပေါ်ဆွဲငင်, သို့သော်, နိုဝင်ဘာလ 25, 1977 သည်အထိထိုနေ့ရက်တွင်, စစ်တပ်ကော်မရှင်အားလုံးအရေအတွက်အပေါ်သူ့ကိုအပြစ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Ninoy Aquino ပစ်ခတ်ရန်ကစားသမားအားဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့ဖြစ်တယ်။
အကျဉ်းထောင်ကနေ, Ninoy 1978 ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အဓိကအဖွဲ့အစည်းအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူကတိုတောင်းသောအဘို့ကို "ပြည်သူ့ပါဝါ" သို့မဟုတ် Laka ng Bayan ပါတီ, လာဗန်ကိုခေါ်အသစ်တစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလာဗန်ပါတီကြီးမားသောလူထုထောက်ခံမှုခံစားဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အကြံအဖန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ရွေးကောက်ပွဲ Ninoy Aquino ပင်တိုက်ပိတ်ခံရအတွက်ဆဲလ်အနေဖြင့်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သောနိုင်ငံရေးဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ Feisty နှင့် unbowed မိမိခေါင်းကိုကျော်ဆွဲထားသေဆုံးဝါကျနေသော်လည်း, သူမားကို့စစစ်အစိုးရကရန်အလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
Ninoy ရဲ့နှလုံးပြဿနာများနှင့် Exile
တစ်ချိန်ချိန် 1980 ခုနှစ်မတ်လထဲမှာမိမိအဘ၏အတှေ့အကွုံတစ်ခုပဲ့တင်သံအတွက် Ninoy Aquino ကသူ၏အကျဉ်းခန်းထဲမှာနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နှလုံး Center မှာတစ်ဦးကစက္ကန့်နှလုံးတိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးပိတ်ဆို့သွေးလွှတ်ကြောခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်အကွီနိုဖိလစ်ပိုင်ခွဲစိတ်မားကို့စသဖြင့်ပုပ်ကစားကိုကြောက်ရွံ့သူ့ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
Imelda မားကို့သူ့ကိုခွဲစိတ်မှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှု furlough ရာပူဇော်သက္ကာကိုမေလ 8, 1980 ခုနှစ်အပေါ် Ninoy ရဲ့ဆေးရုံအခန်းတစ်ဦးအံ့အားသင့်အလည်အပတ်ခရီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမသည်သို့သော်နှစ်ခုသတ်မှတ်ချက်များရ၏ Ninoy ဖိလစ်ပိုင်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ကတိပေးခဲ့, သူသည်အမေရိကန်အတွက်ထိုညဉ့်, Ninoy Aquino နဲ့သူ့မိသားစု Texas ပြည်နယ် Dallas ဘို့ချည်နှောင်လျက်နေတဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာလေဒါကနေစဉ်မားကို့စစစ်အစိုးရကိုရှုတ်ချဖို့မကျိန်ဆိုခဲ့ကြရသည်။
အဆိုပါအကွီနိုတို့မိသားစုကိုချက်ချင်းခွဲစိတ်ကုသရာမှ Ninoy ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ဖိလစ်ပိုင်မှပြန်လာဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကမနီးမဝေးဘော်စတွန်ကနေနယူတန်, မက်ဆာချူးဆက်မှအစားပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ Ninoy ထံမှပညာသင်ဆုများကိုလက်ခံ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာမက်ဆာချူးဆက် သူ့ကိုအပန်းဖြေပို့ချချက်များဆက်တိုက်ပေးနှစ်ခုစာအုပ်တွေရေးသားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သော။ Imelda အားမိမိအစောပိုင်းကပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုနေသော်လည်း Ninoy အမေရိကန်၌မိမိနေထိုင်တစ်လျှောက်လုံးမားကို့စစစ်အစိုးရ၏အလွန်အမင်းအရေးပါခဲ့သည်
အစောပိုင်း 1983 ခုနှစ်မှာ, ဖာဒီနန်မားကို့စရဲ့ကနျြးမာရေးနှင့်ဖိလစ်ပိုင်အပေါ်သူ၏သံချုပ်ကိုင်အတူဆိုးရွားလာတယ်။ သမ္မတအကွီနိုမားကို့ရဲ့ရုတ်တရက်သေမင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, တိုင်းပြည်အတွက်ပရမ်းပတာသို့ဆင်းမည်ဟုကာ ပို. ပင်အစွန်းရောက်အစိုးရပေါ်ထွက်လာစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။
Ninoy Aquino သူကောင်းစွာ re-ထောင်ကျခံရသို့မဟုတ်ပင်လုံးလုံးလြားလြားဦးသေဆုံးစေခြင်းငှါအပြည့်အဝသတိပြုဖိလစ်ပိုင်မှပြန်လာ၏အန္တရာယ်, ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမားကို့စစစ်အစိုးရ၏, သူ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြန်ရုပ်သိမ်းသူ့ကိုဗီဇာငြင်းပယ်, သူတို့တိုင်းပြည်သို့အကွီနိုကိုရောက်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဆင်းသက်ရှင်းလင်းရေးခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းများသတိပေးမိမိပြန်လာကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 13, 1983 ရက်တွင်စတင်ကာသမ္မတအကွီနို Los Angeles မြို့, စင်္ကာပူ, ဟောင်ကောင်နှင့်မှဘော်စတွန်ကနေ meandering, တစ်ပတ်ကြာလေယာဉ်လမ်းကြောင်းပျံသန်း ထိုင်ဝမ် မနီလာ၏သူ၏နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးရန်။ မားကို့စထိုင်ဝမ်နှင့်သံတမန်ဆက်ဆံရေးဖြတ်မိသောကြောင့်, အစိုးရကမနီလာထံမှ Ninoy Aquino ကွာစောင့်ရှောက်သူ၏စစ်အစိုးရ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အဘယ်သူမျှမတာဝန်အောက်တွင်ရှိခဲ့သည်။
တရုတ်လေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းမှု 811 သြဂုတ် 21, 1983 ရက်တွင်မနီလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ဆင်းသက်တော်မူသည်အတိုင်း, Ninoy Aquino ဟာသူတို့ရဲ့ကင်မရာအဆင်သင့်ရှိသည်ဖို့ယျတျောနှငျ့အတူခရီးသွားနိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာများသတိပေးခဲ့သည်။ "သုံးလေးမိနစ်ကိစ္စများတွင်ကအားလုံးကိုကျော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟုသူကအေး prescience နှင့်အတူမှတ်ချက်ချသည်။ နှိမ့်ချထိမိလေယာဉ်ပြီးနောက်မိနစ်; သူသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Ninoy Aquino ရဲ့အမွေအနှစ်
open-အစ်အသုဘမီ, Ninoy ရဲ့မိခင် Aurora ကွီနိုဟာ လိုက်. ငိုကြွေးမြည်တမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျည်ဆံဒဏ်ရာကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်သူမ၏သားရဲ့မျက်နှာကိုမိတ်ကပ်၏ရှင်းလင်းသောကျန်ရစ်စေခြင်းအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ သူမသည်လူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြ "သူတို့ငါ့သားဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ။ "
ခန့်မှန်းခြေနှစ်ဦးကိုလူဦးရေသန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောအရာအတွက် 12 နာရီကြာအသုဘစီတန်းပြီးနောက်, Ninoy Aquino မနီလာသတိရအောက်မေ့ Park မှာသင်္ဂြိုဟ်လေ၏။ လစ်ဘရယ်ပါတီများ၏ခေါင်းဆောင်နာမည်ကြီးအဖြစ်ကွီနို eulogized "ကျနော်တို့မရှိခဲ့ဘူးအကြီးမြတ်ဆုံးသမ္မတ။ " အတော်များများကဝေဖန်သုံးသပ်အဆိုပါကွပ်မျက်ခံရ Anti-စပိန်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်နှင့်အတူသူ့ကိုနှိုင်းယှဉ် ဟိုဆေး Rizal ။
သူမ Ninoy ရဲ့သေသောနောက်ကိုလက်ခံရရှိထောက်ခံမှု၏သှနျးလောငျးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်း, ယခင်ကရှက် Corazon Aquino anti-မားကို့စလှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1985 ခုနှစ်တွင်ဖာဒီနန်မားကို့စတန်ခိုးတော်အားဖြည့်ရန် ploy အတွက်ဒင်္သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုခေါ်။ Cory ကွီနိုကသူ့ကိုဆန့်ကျင်သို့ပွေးလေ၏။ ဖေဖော်ဝါရီ 7, 1986 ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မားကို့စတစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိမ်ရလဒ်အတွက်ဆုရှင်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။
မစ္စစ်အကွီနိုအကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြပွဲများကိုချေါပွီးဖိလစ်ပိုင်သန်းပေါင်းများစွာသူမ၏အခြမ်းမှဖေးမ။ အဆိုပါအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်ယျ "လူတွေကပါဝါတော်လှန်ရေး" ဖာဒီနန်မားကို့စထိုနေ့လရုံးခန်းထဲကနှင့်ပြည်ပရောက်သို့အတင်းအဓမ္မခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 1986 တွင်, Corazon Aquino ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ 11 နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနှင့်၎င်း၏ ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတ ။
Ninoy Aquino ရဲ့အမွေလူအမျိုးမျိုးတို့၏နိုင်ငံရေးသို့ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာဒီမိုကရေစီအခြေခံမူမြင်သောမိန်းမသည်သူ၏မယားရဲ့ခြောက်နှစ်သမ္မတသက်တမ်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဇွန်လ 2010 ခုနှစ်တွင်သူ့သားအဖြစ်လူသိများ Benigno ရှိမောင်အကွီနို III ကို "Noy-noy" ဟုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ချိန်ကပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်အရောင်မှိန်သည့်အကွီနိုတို့မိသားစု၏ရှည်လျားသောသည့်နိုင်ငံရေးသမိုင်း, ယခုယနေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်များနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ။
Karnow, Stanley ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Image ကိုခုနှစ်တွင်: ဖိလစ်ပိုင်မှာအမေရိကားရဲ့အင်ပါယာ, နယူးယောက်: ကျပန်းအိမ်, 1990 ။
ယောဟနျသ MacLean, BBC News, သြဂုတ်လ 20, 2003 "ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအကွီနို, Killing ကိုကြှနျမတို့" ။
နယ်လ်ဆင်, အန်း။ မိခင်ဂျုံးစ်မဂ္ဂဇင်း, ဇန်နဝါရီလ 1988: "ယုံကြည်ခြင်း Cory ကွီနိုရဲ့စမ်းသပ်မှုသည်ပန်းရောင်ညီအစ်မများ၏ Grotto ခုနှစ်တွင်" ။
Nepstad, ရှာရုန်နိုင်ကြောင်း။ အကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေး: ပြည်တွင်းစစ်ဟာနှောင်းပိုင်း 20 ရာစုအတွင်း Resistance, အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, 2011 ။
Timberman, ဒါဝိဒ်သည် G. အဖြေ Changeless မြေ: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရေး, စင်္ကာပူထဲမှာအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှု: အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးအင်စတီကျု, 1991 ။
1800 ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဦးက Timeline ကို
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Xia မင်းဆက်၏ဧကရာဇျ
Pol Pot, ကမ္ဘောဒီးယား၏အသား
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး Timeline ကို: 1793 -4(အဆိုပါအကြမ်းဖက်)
အဆိုပါ Avatamsaka န္တာန်တိ
(အလှမယ်မှ) "Manquer" ၏ရိုးရှင်းသော conjugation Learn
အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းလေ့လာရေး Rovers ကိုဂုဏ်ပြုသော
18 ရာစု Timeline ကို: 1700 - 1799
ဓာတုဗေဒအတွက် Alkoxide အဓိပ္ပာယ်
Steve Austin Timeline ကို
အယ်လ်boletínက de ဗီဇာ Que aplica en el mes က de abril de 2018
Coral ၏ဝိညာဉျရေးရာနှင့်ကုသမှု Properties ကို
Broomcorn (Panicum miliaceum) - ပြည်တွင်း၏သမိုင်း
တြိဂံ Shirtwaist Factory မီးသတ်: နောက်ပိုင်း
လေ့ဟင်စကား: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Implicit
လူမီနီယမ်နှင့် Tinsel ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ